Qabweynidii Soomaalida, Bilawgii Qarnigii Hore | Doodwadaag waa Danwadaag.
Halkaan waxaan ku soo gudbinayaa qabsin ka mid ah buugga Dhaqanka Soomaalida ee uu qoray Dr-Saadiq Enow:
Jeneral Douglas Jordin oo ahaa ninkii jebiyay Daraawiishta, buugiisa The Mad Mullah of Somaliland wuxuu ku qoray mar uu sarkaal Ingiriis ahi uu su´aal waydiiyay nin miyiga geel ku raacda oo magaalada Berbera yimid.
Geel-jirkii : Fursad ayaad hesheen oo keliya. Haddaan annagu fursaddaa heli lahayn, annaga ayaa idiin iman lahayn!.
Waxaa kale oo iyaduna dhacday dood dhexmartay sarkaal talyaani ah iyo nin kamid ahaa ciidamadii boqor Cismaan oo maxbuus ahaan loo soo qabtay markii uu talyaanigu ku guulaystay dagaalladii uu ku qabsaday gobollada waqooyi-bari. Sarkaalkii ayaa waxaa la hor-keenay ninkii maxbuuska ahaa, dabadeed wuxuu ku yiri :
” Rafaadka dadkaagii ka muuqda iyo halaaga degaankiinii qabsaday, sow idiin kagama wanaagsanaateen in aad nala heshiisaan oo aad na oggolaataan sidaasna aad nabad ku noolaataan “.
Maxbuuskii baa jawaabay oo yiri :
” Waagaan yaraa ayeeyaday baa waxay iiga sheekaysay Wan iyo Sagaaro sheekaystay. Wankii baa yiri Sagaaroy waxa kaa muuqda oo weyd iyo rafaad ah waxaa kuugu wacan waa adiogoo markii aad qof aragto carara, sidaa darteed duur cidla ah ayaad ku bakhtidaa. Anigase meeshii baad iyo biyo leh waa lay sahmiyaa, markaasaa anigoo lay ilaalinayo lay geeyaa. Haddaba waxaan kugula talinayaa in aad isoo raacdo si ay diifta kaaga harto. Sagaaradii ayaa u jawaabtay oo tiri: -Intii meel kasta oo wanaagsan lay sahmin lahaa, iyada oo lay ilaalinayona laygeen lahaa, dabadeedna anigoo qurxoon markii lay baahdo lay gowrici lahaa, waxaan door bidayaa in aan baahi iyo oon duurka la joogo “.
WQ Maxammed Cabdullaahi Jaamac